ဖရန်စွာ ကူပါရင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြင်သစ်တေးရေး ဆရာတစ်ဦး (၁၆၈၈ - ၁၇၃၃)
ဖရန်စွာ ကူပါရင် (ပြင်သစ်: François Couperin) သည် ပြင်သစ်လူမျိုး ဘားရော့ခ်ခေတ် တေးရေးဆရာ၊ ဟာ့ပ်ဆီကော့ဒ်တီးခတ်သူနှင့် အော်ဂန်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏မိသားစုဝင်များသည် ဂီတပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသောကြောင့် သူအား "Couperin the Great" ဟုကွဲလွဲစေရန် ခေါ်ဆိုကြသည်။
၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၆၆၈
၁၁ စက်တင်ဘာ ၁၇၃၃ (အသက် ၆၄ နှစ်)
မာရီ အန်း အန်ဆူ
မာဂူရီ အန်တွိုင်းနက် ကူပါရင်
မာရီ မဒနယ်(လ်) ကူပါရင်
ဖရန်စွာ လောရန့် ကူပါရင်
ချားလ်စ် ကူပါရင် (ဖခင်)
မာရီ ကူပါရင် (မိခင်)
ဖရန်စွာ ကူပါရင်သည် ၁၆၆၈ ခုနှစ်တွင် ပါရီမြို့၌ ဂီတဝါသနာပါသော မိသားစုထံ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်ဖြစ်သူ ချားလ်စ် ကူပါရင် (Charles Couperin) သည် စိန့်ဂျာဗေ (Saint Gervais) ဘုရာကျောင်း၌ အော်ဂန်ဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဦးလေးဖြစ်သူ လူဝီ ကူပါရင် (Louis Couperin) သည်လည်း ထို‌ရာထူးနေရာ၌ သူ၏ဖခင်မဆက်ခံမီ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ချားလ်စ် ကူပါရင်သည် ၁၆၇၉ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ရာ အော်ဂန်ဆရာဖြစ်သူ ဂျားကဲစ် သွိုမလင် (Jacques Thomelin) သည် ဖရန်စွာ ကူပါရင်အား ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့၍ ဂီတပညာကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ဖရန်စွာ ကူပါရင်သည် သူ၏ဂီတစွမ်းဆောင်ရည်များကို ငယ်စဉ်ကပင် ပြသနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ၁၆၈၅ ခုနှစ်တွင် စိန့်ဂျာဗေ ဘုရားကျောင်းသည် သူအားအလုပ်စာချုပ်မချုပ်ဆိုခဲ့သော်လည်း လစာကိုစတင်၍ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူ၏ဖခင်ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ထိုဘုရားကျောင်းကောင်စီသည် သူအားအသက် ၁၈နှစ်ပြည့်သောအခါ အော်ဂန်ဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ခဲ့သည်။
၁၆၈၉ ခုနှစ်တွင် ကူပါရင်သည် မာရီ အန်း အန်ဆူ (Marie-Anne Ansault) နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ရာ ကလေးသုံးယောက်ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ၁၆၉၂ တွင် သူသည် ပြင်သစ်ဘုရင် လူဝီ ၁၄ (Louis XIV) ၏နန်းတော်၌ တီးခတ်ဖျော်ဖြေသူနေရာကို ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် စိန့်ဂျာဗေဘုရားကျောင်း၏ အော်ဂန်ဆရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘုရင့်နန်းတော်၌ ဖျော်‌‌ဖြေရေးသမားအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ တေးရေးဆရာအဖြစ်သော်လည်းကောင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဖရန်စွာကူပါရင် (၁၇၃၅ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲထားသည်)
၁၇၁၃ ခုနှစ်တွင် သူသည် ဘုရင့်နန်းတော်မှ ဂီတထုတ်ဝေနိုင်ခွင့်ကို ပေးအပ်ခြင်းခံရသောကြောင့် "Pieces de clavecin" (ဟာ့ပ်ဆီကော့ဒ်အတွက် သီချင်းများ) ၏ပထမအတွဲကို စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၇၁၆ တွင် "L'art de toucher le clavecin" (ဟာပ်ဆီကော့ဒ်တီးခတ်ခြင်း အနုပညာ) အမည်ရှိသော ဂီတကျမ်းစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၇၁၇ တွင် သူသည် "ordinaire de la musique de la chambre du roi pour le clavecin" ခေါ် ဂုဏ်သိက္ခာအမြင့်မားဆုံးသော နန်းတွင်းဖျော်ဖြေသူများအနက် တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရင်လူဝီ ၁၄ နတ်ရွာစံသွားသောအခါတွင် နန်းတွင်းဖျော်ဖြေမှုများမှာ နည်းပါးလာခဲ့လေသည်။
၁၇၂၀ ခုနှစ်မှစ၍ သူ၏ကျန်းမာရေးမှာ တဖြည်းဖြည်းချွတ်ယွင်းလာခဲ့လေသည်။ ၁၇၃၀ တွင် သူ၏ နန်းတွင်းဖျော်ဖြေသူနေရာကို သမီးဖြစ်သူ မာဂူရီ အန်တွိုင်းနက် ကူပါရင် (Marguerite-Antoinette Couperin) ကအစားထိုးခဲ့ရာ ပထမဦးဆုံးသော အမျိုးသမီးနန်းတွင်းဖျော်ဖြေသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုများမှာ Pièces de violes (တယောအတွက် သီချင်းများ) (၁၇၂၈) နှင့် Pieces de clavecin စတုတ္ထတွဲ (၁၇၃၀) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဖရန်စွာ ကူပါရင်သည် ၁၇၃၃ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဖရန်စွာ ကူပါရင်သည် အီတလီ တေးရေးဆရာ အာကန်ဂျယ်လို ကိုရယ်လီ (Arcangelo Corelli) နှင့်သိကျွမ်းမှုများရှိခဲ့ရာ သူ၏ဆိုနာတာများကို မိမိနိုင်ငံ၏ ဂီတလောကသို့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကိုရယ်လီအားရည်ညွှန်း၍လည်း သီချင်းများရေးစပ်ခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းများတွင် ပြင်သစ်နှင့်အီတလီ ဘားရော့ခ်ခေတ်ဂီတ၏ လက္ခဏာရပ်များကို ပေါင်းစည်းရေးသားထားသည်။
သူ၏လူသိအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်သော "ဟာ့ပ်ဆီကော့ဒ် တီးခတ်ခြင်းအနုပညာ" (L'art de toucher le clavecin) တွင် လက်အနေအထာ၊ ကီးခလုတ်အထိအတွေ့ စသောသိမှတ်ဖွယ်ရာတို့ကို ရေးသားထားသည်။
ဟာ့ပ်ဆီကော့ဒ်သီချင်းများ (Pieces de clavecin) ကိုအတွဲလေးတွဲဖြင့် ထုတ်ဝေထားခဲ့ရာ သီချင်းအပုဒ်ပေါင်း ၂၃၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ထိုသီချင်းတွဲများကို ကူပါရင်နှင့် ပေးစာအပြန်အလှန်ပို့သူ ယိုဟန် ဆီဘက်ရှန်း ဘက်ရှ် သည်အလွန်နှစ်သက်ခဲ့သည်။
Higginbottom, Edward (2001). "Couperin: (4) François Couperin (ii) [le grand]". In Root, Deane L. (ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Oxford University Press.
Apel၊ Willi (1972)။ The History of Keyboard Music to 1700။ Bloomington: Indiana University Press။ pp. 736–738။
Beaussant၊ Philippe (1990)။ François Couperin; translated from the French by Alexandra Land။ Amadeus Press။ ISBN 0-931340-27-6။
Gauthier၊ Laure (2008)။ Mélodies urbaines: la musique dans les villes d'Europe (XVIe-XIXe siécles) (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Presses Paris Sorbonne။ p. 256။ ISBN 978-2-84050-563-1။ 2013-05-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: ref=harv (link)
Gustafson၊ Bruce (2004)။ "France"။ in Alexander Silbiger (ed.)။ Keyboard Music Before 1700။ New York: Routledge။ pp. 115–116။
François Couperin works at IMSLP
François Couperin at Encyclopædia Britannica
François Couperin at ChoralWiki
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖရန်စွာ_ကူပါရင်&oldid=737037" မှ ရယူရန်
၈ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၄:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၄:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။